Cilmi-baarista Bulshada iyo Dakhliga | Martech Zone
Cilmi-baarista Bulshada iyo Dakhliga
Khamiis, Agoosto 1, 2013 Jimcaha, Agoosto 2, 2013 Douglas Karr
Sida suuq geyn badan iyo iibin, isku xirka dhibcaha mararka qaar way adagtahay inta udhaxeysa dhaqdhaqaaqa macaamiisha ay qaataan iyo barta dhabta ah ee wax iibsashada Shaki kuma jiro, in kastoo, inuu jiro isku xirnaan udhaxeysa dhaqdhaqaaqa bulshada iyo dhaqanka wax iibsiga. CMOs waxay bilaabeen inay bartaan cilmi baaris inay jirto sabab sidoo kale stuff waxyaabo xiise leh! Sawir-gacmeedkan ka socda SocialAnnex, a madal suuq geynta warbaahinta bulshada ee loogu talagalay ecommerce, waxay bixisaa qaar ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah.
Macluumaadka macaamilka ee waxtarka leh, ha ahaato mid horseed u ah, tirakoobka dadweynaha, dareenka, dhaqanka macaamilka, iyadoo la daneynayo saadaalinta, weydiisashada ama hagida wax soo saar ee wax soo saarka waa shaqo suuq geyn iyo wejiyo badan leh. Maanta, waaberiga macaamilka bulshada, waa mid ka wajiyo badan weligiis laakiin sidoo kale ka raqiisan, ka fudud oo ka awood badan.
Tags: wacyigelinta noocaastaan ​​daacad ahgo'aamada iibsigaDakhligadareenxogta bulshadahawlgelinta bulshadasaamaynta bulshadalogin bulshadacilmi baarista bulshadawadaagista bulshada
Tarjumaadda Luqadda oo Fudud: Tarjumaad Hal Saac ah